फिजियो थेरापी उपचारतर्फ विरामीको आकर्षण बढ्दो - Sajhamanch
२०७८, आश्विन ११ गते वेलुकिको ०७:५१:२७ बजे Monday 27th September 2021
September 8, 2021 2:25 pm उमानाथ भण्डारी
कमल । हरेक वर्ष सेप्टेम्वर ८ तारिकका दिन विश्व फिजियो थेरापी दिवश मनाउने गरिन्छ । फिजियो थेरापीका बारेमा सबैलाई ज्ञान नभएपनि पछिल्लो समय फिजियो थेरापी गर्नेको संख्या र फिजियो थेरापी क्लिनिक खुल्ने क्रमसमेत बढीरहेको छ ।
फिजियो थेरापी अर्थात भौतिक चिकित्सा विज्ञानको एक मुख्य शाखा हो । जुन एक समग्र दृष्ट्रिकोण अर्थात होरेष्टिक एप्रोज सग सम्बन्धित रहेको छ ।
आजको दिनसम्म पनि सबै व्यक्तिहरुलाई फिजियो थेरापी भनेको के हो ? फिजियो थेरापीले के गर्छ ? भौतिक चिकित्सा पनि स्वास्थ्य चिकित्साको एक महत्वपूर्ण अंग हो भन्ने विषयसमेत ज्ञात भईसकेको अवस्था छैन । फिजियो थेरापी चिकित्सकको बारेमा तिनका पद्धतीका सेवाहरुबारे के कस्ता समस्याहरु पर्दा फिजियो थेरापी चिकित्सक ग सम्पर्क गर्न समेत चिकित्सकले बताउने गर्नु भएको छ ।
फिजियो थेरापी वा भौतिक चिकित्सा शास्त्रको धेरै वटा विधा हुन्छन् । हाडजोर्नी तथा मांशपेशी सम्बन्धि फिजियो थेरापी अत्यन्त गहन भुमिका हुन्छ । हाडजोर्नी तथा मांशपेशी सम्बन्धि समस्या भएका बिरामीको उपचार तथा पुन स्थापना गर्ने काम हुन्छ । विभिन्न अनुसन्धान भएका इलेक्ट्रोनिक्स मेशिन तथा म्यानुअल थेरापी विधिबाट विभिन्न स्वास्थ्य समस्याको उपचार गर्ने विधि हुन्छ । सामान्यतया हाडजोर्नी सम्बन्धि दुखाई कम गर्न कमजोर मांशपेशीलाई बलियो बनाउन, मांशपेशी सुक्न नदिन, शरीरको कार्य क्षमता बढाउन, अप्रेशन पछिको पुन स्थापना फिजियो थेरापीको अहम भुमिका हुन्छ ।
बाथरोगको उपचार, नशा च्यापिएको, गर्धनको नशा च्यापिएको, मेरुदण्डको हड्डी खीइएको, घुडा दुख्ने तथा घुडा खीइएको, जोर्नी जाम भएको, मांशपेशी तथा लिगामेन्ट च्यातिएको, हाडजोर्नी शल्यक्रिया पछिको पुनस्थापना फिजियो थेरापीको माध्यमबाट निको हुने दमकस्थित सिटीसी फिजियो थेरापीका कन्सल्टेन्ट. फिजियो थेरापीष्ट विनोद भट्टराई बताउनुहुन्छ ।
न्यूरो फिजियो थेरापी भन्नाले फिजियो थेरापीको एक बिशेष निकाय हो जसमा स्नायू प्रणाली सम्बन्धि समस्या भएर मांशपेसी र सम्वृद्धि प्रणालीमा ह्रास आउने गर्दछ । यसले गर्दा प्यारालाईसिस् हुने छालाको भागहरु लाटो हुने जस्ता समस्याहरुको विभिन्न पद्धतीद्धारा उपचार गरिन्छ । यस उपचार पद्धतीको मुख्य उदेश्य भनेको शारीरीक अवस्था अशक्त वा कमजोर भएका हरुलाई पुन स्थापना गराई पुरानै कार्यशैली र जीवनशैलीमा फर्काउने गर्दछ यसले गर्दा विभिन्न समस्यामा परेका विरामी पछिल्लो समय फिजियो थेरापीमा आउनेको संख्यामा दिनानुदिन बृद्धि हुनेगरेको भट्टराई बताउँनुहुन्छ ।
न्यरो फिजियो थेरापिस्टले नशा सम्बन्धि रोगहरु जस्तै मष्तिस्क घात, मेरुदण्डको चोट, आघातित दिमाखको चोट , परिधिय स्नायुको चोट, पार्किन्सन रोग, बहु स्लेरोसिस उपचारमा मदत गर्दछ । प्रायजसो नशा सम्बन्धि रोगहरुमा छोएको थाहा नहुने, उबचबथिकष्क हुने अनि लामो समय सम्म अस्पतालमा बिताउनु पर्ने भएकाले अरु विभिन्न समस्याहरु थपिने भएकोले पनि पछिल्लो समय फिजियो थेरापीमा उपचार गराउन आउनेको संख्या बढीरहेको फिजियो थेरापिष्ट भट्टराई बताउँनुहुन्छ ।
शरीरका विभिन्न मांशपेसी सुक्नु , हाडजोर्नी जाम हुनु, छातीको संक्रमण हुनु जस्ता समस्यामा समेत फिजियो थेरापीको उपचार प्रभावकारी हुने गर्दछ । शरिरमा आउने विभिन्न प्रकारका समस्यालाई सरल र सहज रुपमा फिजियो थेरापी बाटै प्रभावकारी उपचार हुने गर्दछ । पछिल्लो समय कम्मरको दुखाई, प्यारालाईसिस,हाजजोनीका साथै वभिन्न कारणले अपांङ्गगता भएका व्यक्तिका लागी समेत फिजीयो प्रभावकारी बन्दै गएको अर्का फिजियो थेरापिस्ट सौजन सिवाकोटी बताउनुहुन्छ ।
बाल चिकित्सा फिजियो थेरापी अन्तरर्गत बालबालिकाको पुन स्थापनामा पनि फिजियो थेरापीको एकदमै महत्वपूर्ण भुमिका रहेको छ । अन्य फिजियो थेरापिस्ट जस्तै बाल फिजियो थेरापिस्ट पनि ह्दय प्रणाली संग सम्बन्धित हुन्छन् । उहाहरुको लक्ष्य शारीरीक कमजोरी मांशपेशी विचलन भएको बिकासात्मक ढिलाई जसलाई हामी developmental delay भन्छौ र अनि अन्य विभिन्न सम्बन्धित समस्याको प्रभावहरुलाई कम गर्न मस्कुलर स्कुलेटर बिकासलाई बढुवा दिन विभिन्न क्रियाकलाप गराएर जस्तै बालबालीकाहरुलाई प्लेथेरापी गराउनु पर्दछ । जुन बालबालिकाको हकमा एक महत्वपृर्ण थेरापी हो ।
बालबालिकामा देखीने कमन केशहरु मष्तिस्क पक्षघात,Austim,down’s syndrome, muscular dystrophy, osteomyelitis, osteogenesis, spina, bofida exerice अनि बिकासात्माक ढिलाई अर्थात मष्तिस्क दोषहरु रहेका छन् ।
खेलमा फिजियो थेरापी(physiotherapy in sports) भनेको फिजियो थेरापीको त्यो महत्वर्पर्ण ब्रान्च हो जसले sports injuries जसमा मांशपेसी लिगामेन्ट र tendon injuries रोकथाम र त्यसको व्यबस्थापन गर्दछ । sports injuries सबै उमेर खेलाडी रमाइलो गर्न होस या त व्यबसायक होस जुनसुकै injuries चाहे त्यो खेल होस exercise को कारणले होस त्यसलाई जनाइन्छ ।
स्पोर्टस थेरापीमा प्रमुख भागहरु रहेका छन् ।injury prevention फरक खेलमा हुन सक्ने injury फरक हुन्छ । स्पोर्टस फिजियो थेरापीमा त्यो] injury लाई न्यूनिकरण गर्न सकिने फिजियो थेरापिष्ट हरुको भनाईछ ।
आजभोली कतिपय अस्पतालले समेत विरामिलाई फिजियो थेरापी गर्न सल्लाह दिने गरेको पाईन्छ । अस्पतालमा उपचार सम्भव नभएपछि डाक्टरले नै विरामिलाई फिजियो थेरापि गर्न सल्लाह दिने गरकोेले समेत फिजियो थेराजीमा उपचार गर्नेको संख्या दिन प्रतिनिदन बढी रहेको छ ।
विभिन्न समस्याका कारण लामो समय उपचार गर्दा पनि ठिक नभएका विरामी अहिले फिजियो थेरापीमा आएर निको भएकाछन् । यसले गर्दा पछिल्लो समय फिजियो थेरापी प्रति विरामीको आकर्षण बढेको छ । फिडियो थेरापी भौतिक चिकिस्साले अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरुको पुनस्थापना र जीवन गुणस्तर बनाउन महत्वपूर्ण भुमिका निवाह गरेको हुन्छ ।
अपाङ्गगता भएका व्यक्तहरुको परीक्षण तथा जाँच गरी उनिहरुको दैनिक जीवन यापन भोगाईको समस्या पहिचान गरी छोटो र लामो लक्ष्य सेट गरी सेवा प्रदान गरी सक्दो चाँडो स्वस्थ्यमा सुधार ल्याउन सकिन्छ । बालवालिका, वयस्क, जेष्ठ सवै उमेर समूहका विरामीकालागी फिजियो थेरापी अत्यन्तै महत्वपुर्ण प्रविधी मानिन्छ ।
उपचार पद्धति लागि फरक फरक हुन्न सक्छ , प्रत्येक व्याक्तिहरुलाई अस्पताल र पूनस्थापना केन्द्रमा पुग्न सम्भव हुदैन त्यस्ता व्याक्तिहरुलाई समुदायिक स्तरमा गएर फिजियोथेरापी द्वारा सेवा प्रदान समेत गरीदै आएको छ । गर्भवती महिलालाई विभिन्न शारीरिक परिवर्तन भएको समयमा समेत फिजियो थेरापिष्टको सल्लाहले गर्भावस्थामा धेरै फाईदा पुग्ने गर्दछ ।
गर्भपश्चात पनि महिलाहरुलाई धेरै समस्याहरुको सामना गर्नु पर्नेहुन्छ । शरिर कम्जोर हुने जीउ दुख्ने, यी सवै समस्याहरु पनि फिजियोथेरापिष्टको सल्ला लिएर नियमित व्ययाम गर्ने हो भने यस्ता समस्यबाट मुक्ती पाउन सकिने फिजियो थेरापिष्ट भट्टराई बताउँनुहुन्छ ।
फिजियो थेरापीले सबै प्रकारका विरामीलाई फाईदा गर्नुका साथै प्रसुती तथा स्त्री रोगमा समेत फिजियो थेरापीको महत्वपुर्ण भुमिका हुने गर्दछ । न्युरो फिजियो थेरापिस्टले नशा सम्बन्धि रोगहरु जस्तै मष्तिस्क घात, मेरुदण्डको चोट, आघातित दिमाखको चोट, परिधिय स्नायुको चोट, पार्किन्सन रोग, बहु स्लेरोसिस जस्ता रोगमा समेत फिजियो थेरापी महत्व पुर्ण उपचार पद्ती सावित हुँदै आएकोे छ ।
September 8, 2021 2:25 pm | अर्थतन्त्र,समाज,स्वास्थ्य